Wax Ka Bedelka Xeerka Ururada Siyaasada Iyo Axsaabta Oo Todoba Sanadood Ka Hor Golaha Guurtida Somaliland Laaleen Oo Mar Kale La Horkeenay, Asbaabibihii Ay Xiligaa Cuskadeen Iyo Baaqa Madaxweyne Siilaanyo | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ayaa fadhi aan caadi ahayn oo deg deg ah ugu yeedhay inay isugu yimaadaan maalinta Sabtida 7August 2011. Kadib markii ay todobaadkan galeen fasaxa Bisha Ramadaan ee barakaysan. Qoraalka uu madaxweynuhu kaga dalbaday
inay kulan deg deg ah isugu yimaadaan oo uu shalay soo saaray, waxa uu ku sheegay inay golaha guurtidu kulankooda deg deg ah waajibkooda dastuuriga ah kaga gutaan xeerka axsaabta iyo Ururada siyaasada ee L/R 14 200, kaas oo golaha wakiiladu wax ka bedel ku sameeyeen dhowaan, isla markaana u gudbiyeen golahaa, iyagoo soo jeedintooda ku xusay in dib loo furo Ururada siyaasada iyo axsaabta.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa dalabkiisa ku sababeeyay kadib markii ay deeq bixiyayaasha iyo komishanka doorashooyinku u arkeen fasaxaa mid dabar ku ah nidaanka geedi socodka doorashooyinka ee Somaliland, maadaama uu golahaa hor yaal wax ka bedelka xeerka axsaabta iyo Ururada siyaasada oo golahaa hor yaal, isla markaana loo baahan yahay inay go’aan ka gaadhaan.
Dhinaca kale soo jeedinta wax ka bedelka Xeer L/R 14 oo dhowaan golaha wakiiladu guda galeen dood ku saabsan wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay, iyadoo Mudanayaasha golaha wakiiladu dood ay ka yeesheen ka dib u codeeyay xeerkaa in dib loo furo uraradii siyaasada iyo axsaabta tobankii sanadoodba mar.
Hase yeeshee waxa soo jeedinta dib u furista Ururada siyaasada iyo axsaabta oo muran iyo khilaaf sharci oo soo noqnoqday, taas oo hada soo jeedintaa golaha wakiilada ee wax ka bedelka xeerkaa lagu sameeyay hortaal golaha guurtida oo la filayo inay go,aan ka qaataan.
Iyadoo soo jeedin wax ka bedel iyo kaabis 2005 lagu sameeyay xeerkaa ururada iyo axsaabta siyaasada oo golihii hore ee kan ka horeeyay ansixiyeen, balse ay golaha guurtidu waxba kama jiraan ka dhigeen.
Go”aan golaha Guurtida Somaliland soo saaray 5/4/2005. Kadib dood adag oo ay mudanaayshu ka yeesheen mooshin ku saabsan wax ka bedel lagu sameeyay xeer L/R 14 oo nuxurkiisu in dib loo furo Urarada Siyaasada iyo Axsaabta, kaas oo golahii wakiilada ee nidaam beeleedkii xilgaa u danbeeyay u gudbiyeen. Kadib markii muran ka dhashay xeerka doorashooyinka golaha wakiilada oo waqtigaa dib u dhac badani ku yimi, isla markaana golihii xilgaa oo ujeedadooda ugu weyni ahayd inay jawaab uga dhigaan doodii xiligaa ee sadexda xisbi ku dhaliilayeen golaha wakiilada inay doonayaan inay sii fadhiyaan kuraasta, balse aanay doonayn in la sameeyo xeerkii doorashada ee golahaa, kaas oo markii ay labada gole ansixiyeen loo gudbiyay Maxkamadda Sare ee Somaliland, iyadoo xukuumaddii Madaxweynihii hore u gudbisay ku guulaysatay in laga saaro xeerkaa doorashada waxyaabo ay sheegeen inay ka hor imanayaan dastuurka dalka oo ay dabar ku noqonayaan doorashada.
Golayaasha wakiilada iyo Guurtida ayaa dib loogu soo celiyay xeerkaa oo Maxkamadda sare ee dastuuriga ahi tir tirtay. Laakiin soo jeedintaa ka dib waxay golaha wakiiladu u gudbiyeen golaha Guurtida xeer L/R 14 si dib loogu furo Ururada siyaasada, balse mooshinkaa ay golahii wakiilada ee xiligaa gudbiyeen golaha Guurtida .
Hase yeeshee Lifaaqaa wax ka bedelka xeer L/R 14 ee xanbaarsanaa in dib loo furo Ururada siyaasada ama, xisbiyada waxa ka dooday 40 mudane oo ka tirsan golaha Guurtida Somaliland, kuwaas oo nuxurka doodoodu isugu soo ururtay inaan wax ka bedelka xeerkaa lagu dhisay wax faa”ido ah u lahayn qaranka oo soo kordhinay keliya dib u dhac iyo khilaaf siyaasadeed mooyee, isla markaana Xeer L/R 14 ee 2000. Uu soo baxay xili aan cidna Urur siyaasadeed iyo xisbi toona isugu tegin.
Go”aanka xilgaa 5/4/2005, kasoo baxay golaha Guurtida Somaliland oo shebekada Araweelonews soo ururisay ayaa nuxur ahaan u qornaa sidan:-“waxa jirtay fekred odhanaysa waxa loo baahanyahay in la ansixiyo wax ka bedelkaa si looga baxo koobnaanta waqti kastana doorashada dawladaha hoose loo helo Ururo cusub oo ay tartaamaan, ama kuwii hore oo xejista fekredaa oo aad u yar ma nqon karto mid meel mar ah.
Sidaa awgeed 40 ayaa doodaa wax ka bedelka xeer L/R 14 ee dib u furusahada Ururada siyaasada iyo Xisbiyada ka qaybqaatay, waxayna 61 Mudane oo golaha guurtida ah ayaa ugu danbayntii diiday in la ansixiyo wax ka bedelkaa oo dib loo furo Ururadii siyaasada iyo axsaabta qaranka.
Waxaana ogolaaday hal mudane ayaa ogolaaday in la ansixiyo wax ka bedelka golaha wakiiladu usoo gudbiyeen Guurtida ee Xeer L/R ee 2000. Iyadoo aanu codayn gudoomiyuhu, mana jirin cid ka aamustay.
Golaha guurtida ayaa u cuskaday go’aanka ay ku laaleen gebi ahaanba wax ka bedelka Xeerkaa dhawr qodob oo ay go’aankooda ku cadeeyeen, kuwaas oo ahaa sidan:-
1- wuxuu horseedayaa oo abuurayaa khal khal iyo khilaaf siyaasadeed, nabadgelyo daro hor leh oo nqon doonta mid joogto ah. Aakhirkana sababi kara in afar walba si qabiil u samaystaan Urur dibna loogu noqonayo burburkii Soomaali halkaa dhigay.
2. wuxuu horseedayaa koritaan la’aan axsaabta qaranka ah.
3. wuxuu burburinayaa tartankii iyo dedaalkii ay kusoo abuurmeen axsaabta qaranku.
4.wuxuu noqday soo jeedin leh dano gaar ah, maadaama la sameeyay xeer L/R 2000, iyadoon cidna sheeganayn Urur iyo xisbi toona.
5. wax ka bedelku wuxuu baalmarsan yahay hanaankii siyaasadeed ee dalka oo ku cad distoorka .
6. nuxur ahaan wuxuu xubnahaa ula muuqday in aanu ahayn munaasib wax ka bedelkani asbaabta loo cuskadayna aanay ahayn mid macquul ah oo lagu qanci karo . “ ayaa lagu yidhi go’aankaa golaha Guurtida oo aan wax saxeex ahi ka muuqan, balse lagu xardhay magaca Gudoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan.”
Maadaama golaha guurtidu shan sannadood ka hor waxba kama jiraan ka dhigeen soo jeedin wax ka bedel sidan oo kale golihii wakiilada ee ay iyagu bedeleen golaha wakiilada ee maanta oo iyaguna wax ka bedel ku sameeyay xeerkaa, kuwaas oo meel mariyay in dib ,loo furo uraradii siyaasadeed iyo axsaabtii, balse ay golaha guurtidu laaleen xiligaa. Laakiin lama garanayo inay golaha guurtidu laali doonaan sidii ay horeba u laaleen todoba sanadood ka hor iyo inay meel marin doonaan wax ka bedelka iyo kaabista xeerkaa L/R 14 ee 2000. Laakiin waxa la eegayaa jawaabta ay golaha guurtidu ka bixiyaan wax ka bedelka iyo kaabista xeerkaa hor yaala oo ah kii ay hore u diideen 61 mudane oo golaha guurtida ah.